कार्यदलमा सहमति भएपछि माधव कुमार नेपाल के भन्छन् ? - Reel Mandu
कार्यदलमा सहमति भएपछि माधव कुमार नेपाल के भन्छन् ?
काठमाडौं- नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलले आइतबार राति गरेको १० बुँदे सहमतिलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सकारात्मक भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, त्यसमा प्रयोग भएका भाषाको अर्को व्याख्या भएमा भने आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
‘मैले भर्खरै भीम रावलजीबाट यसबारे सबै जानकारी पाएँ, लेखिएका कुरामा मेरो खास आपत्ति छैन’, नेपालले आइतबार अबेर राति भने, ‘तर, अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने र हामीले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षरलाई प्रभावित पार्नेगरी त्यसको ब्याख्या गर्न खोजियो भने त्यो स्वीकार्य हुने कुरै छैन।’
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धा र त्यसमा रहेको एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षरबारे उल्लेख गर्दै सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं।’ नेपालले कार्यदलका आफ्नोतर्फका सदस्यहरुले यसमा अन्यथा ब्याख्या नहुने बचन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षले दिएको आफूलाई बताएको उल्लेख गरे।
नेपालले भने,’उहाँहरुले ओलीपक्षबाट बचन नै आएको छ भन्नुभएको छ, यसबाट अदालतको फैसला र हस्ताक्षरलाई प्रभावित पार्ने काम हुँदैन भन्नु भएको छ। यो अदालत र हस्ताक्षरलाई प्रभावित पार्ने कुरा होइन, फैसला आएपछि पार्टी कमिटी बसेर त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्ने कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्छ। ब्याख्या गर्दा यसभन्दा फरक गरियो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन। त्यसलाई मानिँदैन।’
नेपालले जेठ २ मा फर्कने कुरामा केही विचार गरेरै सहमति गरेको आफूले बुझेको उल्लेख गरे। उनले एमालेको अबको केन्द्रीय कमिटी बैठक १४ औं नभएर १० औं बैठक हुने स्पष्ट पारे। २०७५ जेठ २ अगाडि ९ वटा मात्र बैठक बसेको उल्लेख गर्दै उनले अब १०औं बैठक भनेरै माइन्यूटमा लेखिनुपर्ने बताए। ‘त्यो १० औं बैठक हुन्छ र त्यहाँबाट हुने निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो स्थान सुनिश्चित हुन्छ भने ठिक छ, बहुमतका आधारमा पेलेर जान खोजियो भने त्यही दिन त्यसलाई अस्वीकार गरिन्छ।’